Taliye Feyfle oo lagu dilay dagaalka Guriceel iyo Ahlu Sunna oo dib ugu soo laabatay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Taliye Feyfle oo lagu dilay dagaalka Guriceel iyo Ahlu Sunna oo dib ugu soo laabatay
written by Admin 24/10/2021
Taliyihii Ururka 6aad, Guutada 16aad ee Kumaandooska Danab ee Qaybta Galmudug, Gaashaanle Cabdiladiif Axmed Culusow (Feyfle) ayaa lagu dilay dagaal qaraar, dib uga qarxay Magaalada Guriceel.
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya qaabka uu u dhintay Taliyaha. Wararka qaar ayaa sheegaya in Xoogaga Ahlu Sunna ay masaafo fog ka soo toogteen Taliyaha, halka warar kalena ay sheegayan in dhaawac culus uu ka soo gaaray dagaal lagu soo dhabar jebiyay Ciidamada Dowladda, markii dambena uu dhaawacaasi u geeriyooday.
Gaashaanle Feyfle ayay dadku ku barteen dagaaladii bishii July ee Al Shabaab looga xoreeyay deegaanada Bacaadweyne iyo Cammaara, markaas oo door muuqdo uu ku lahaa hawlgalka xoreynta ee Koonfurta Gobolka Mudug. Xilligaas oo darajadiisu ahayd Dhamme ayaa loo dalacsiiyay Gaashaanle.
Dhanka kale xaalad hubinta la’aan ah ayaa caawa laga soo sheegaya inay ka jirto Magaalada Guriceel, ka dib markii Xoogaga Ahlu Sunna gelinkii dambe ee maanta, ay dhowr jiho ka soo weerareen magaaladaasi, dibna ay ugu qaybsadeen qaybo badan oo magaalada ka mid ah.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda iyo kuwa Galmudug ay dib uga baxeen goobihii muhiimka ahaa, ee ay maanta dagaalka uga qabsadeen xoogagaasi.
Ma jirto cid haatan si buuxdo gacanta ugu hayso Magaalada Guriceel, labada dhinac ayaana magaalada ku wada sugan.
Dagaalkan ayaa noqonaya kiisii ugu qaraaraa ee intii muddo ahba ka dhaca Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
Taliye Feyfle oo lagu dilay dagaalka Guriceel iyo Ahlu Sunna oo dib ugu soo laabatay was last modified: October 24th, 2021 by Admin
Shiinaha: way naga go’an tahay wax ka qabashada cimilada
Faah Faahin Kasoo Baxeysa Gantaallo Caawa Lagu Weeraray Magaalada Asmara
Akhriso:-Galmudug:-NISA oo wariyaal ka qaadatay telefoonnadooda, amarna ku bixisay in wararka doorashada lagu soo wargeliyo
DHAGEEYSO:-Barnaamij gaar oo Dood wadaag ah oo loo Qabtey Bahda Ispoortiska Baardheere.